Vavaka ho fankasitrahana - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-03 > Vavaka ho fankasitrahana
Mitaky ezaka be indraindray ny tenako mba hifoha hivavaka, indrindra fa amin'izao fotoana izao isika dia mihidy mandritra ny valan'aretina corona ary tsy afaka manao ny fanaontsika andavanandro intsony mandritra ny fotoana maharitra. Sarotra amiko mihitsy aza ny mitadidy hoe andro inona amin’ny herinandro. Inona àry no azon'ny olona atao rehefa mijaly noho ny fahalainana ny fifandraisana amin'Andriamanitra, indrindra fa ny fiainam-bavaka, na - miaiky aho - noho ny tsy fahazotoana?
Tsy manam-pahaizana momba ny vavaka aho, ary matetika no sarotra amiko ny mivavaka. Mba hahitako fiandohana aza, dia matetika aho no mivavaka amin’ny andininy voalohany tahaka an’ity salamo ity: “Miderà an’i Jehovah, ry fanahiko, ary izay ato anatiko, dia ny anarany masina! Miderà an'i Jehovah, ry fanahiko, ary aza misy hadinoinao ny soa nataony taminao: Izay mamela ny helokao rehetra sy manasitrana ny aretinao rehetra" (Salamo 10.3,1- iray).
Manampy ahy izany. Teo am-piandohan’ny Salamo anefa dia nanontany tena aho hoe: Iza no resahin’i Davida eto? Ao amin'ny salamo sasany dia miresaka mivantana an'Andriamanitra i Davida, amin'ny toe-javatra hafa dia miresaka amin'ny olona izy ary manome toromarika momba ny fitondran-tenany amin'Andriamanitra. Izao anefa no lazain’i Davida: Miderà an’i Jehovah, ry fanahiko! Niresaka tamin’ny tenany àry i Davida ary nananatra ny tenany mba hidera sy hidera an’Andriamanitra. Nahoana no tsy maintsy milaza amin’ny fanahiny izay tokony hataony izy? Satria ve izy tsy manana motivation? Ny ankamaroan'ny olona dia mino fa ny firesahana amin'ny tenanao no famantarana voalohany amin'ny aretina ara-tsaina. Ny fahasalamana ara-panahy anefa no resahin’io salamo io. Indraindray isika dia mila manery ny tenantsika mba hanosika antsika hanohy.
Mba hanaovana izany, dia tsaroan’i Davida ny fomba mahatalanjona nitahian’Andriamanitra azy. Manampy antsika hamantatra ny hatsaram-panahin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy sy ireo fitahiana maro azontsika izany. Izany dia mameno antsika amin’ny faniriana hivavaka sy hidera azy amin’ny fanahintsika rehetra.
Iza no mamela ny fahotantsika rehetra sy manasitrana antsika amin'ny aretina rehetra? Andriamanitra irery ihany no afaka manao izany. Avy aminy ireo fitahiana ireo. Noho ny fitiavany miantra sy mangoraka, dia mamela ny fahadisoantsika izy, izay tena antony hiderana azy tokoa. Manasitrana antsika Izy satria miahy antsika amin’ny fangorahana sy ny fahalalahan-tanana Izy. Tsy midika akory izany fa ho sitrana ny olona rehetra sy amin’ny toe-javatra rehetra, fa rehefa sitrana isika, dia mamindra fo amintsika Izy ary mameno antsika amin’ny fankasitrahana lehibe izany.
Noho ny areti-mifindra, dia nanjary nazava tamiko ny loza ateraky ny fahasalamantsika rehetra. Misy fiantraikany eo amin’ny fiainam-bavaka izany: misaotra an’Andriamanitra aho noho ny fahasalamako sy ny fahasalamantsika, ny fahasitranana ny marary, ary na dia maty aza ny olon-tiana na ny fifaliana, dia midera an’Andriamanitra aho noho ny fiainany noho ny fahafantarako fa voavela ny helony amin’ny alalan’i Jesosy. . Eo anatrehan’ireo zavatra ireo, dia mahatsapa famporisihana mafy aho hivavaka amin’ny toerana izay tsy nihazonako teo aloha. Manantena aho fa hanentana anao hivavaka koa izany.